မန္တလေးမြို့တွင် ရှစ်လေးလုံး ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံ နှစ် (၃ဝ)ပြည့် ပုလဲရတု အထိမ်းအမှတ် အခမ်း?? - Yangon Media Group
မန္တလေးမြို့တွင် ရှစ်လေးလုံး ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံ နှစ် (၃ဝ)ပြည့် ပုလဲရတု အထိမ်းအမှတ် အခမ်း??
ရှစ်လေးလုံး လူထုဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံ နှစ် (၃ဝ)ပြည့် ပုလဲရတုအထိမ်းအမှတ် လူထုအခမ်းအနားကို သြ ဂုတ် ၇ ရက်မှ ၈ ရက်ထိ မန္တလေး မြို့ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် ၈၄ လမ်း၊ ၃၁ လမ်းထောင့်ရှိ ဓမ္မသာလခန်းမတွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရှစ်လေးလုံးနှစ် (၃ဝ)ပြည့် ပုလဲရတု အထိမ်းအမှတ်လူထုအ ခမ်းအနားတွင် ဒီမိုကရေစီအရေး တော်ပုံဆိုင်ရာ ပန်းချီနှင့် ဓာတ်ပုံပြ ပွဲ၊ ကာတွန်းပြပွဲကို ပြသသွားမည် ဖြစ်သည်။ အစီအစဉ်အရ သြဂုတ် ၈ ရက်၊ နံနက် ၆ နာရီတွင် သံဃာ့ဒါနဆွမ်းလောင်းပွဲနှင့် မန္တလေး လေးပြင်လေးရပ်ဆရာတော်ကြီး များအား အရုဏ်ဆွမ်းကပ်လှူမည် ဖြစ်ပြီး မွန်းလွဲ ၁ နာရီမှ ညနေ ၄ နာရီထိ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်း ပမည်ဖြစ်သည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ် ၈ ရက်တွင် မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီခေါ် မဆလတစ်ပါတီအာဏာ ရှင်စနစ်ဖြုတ်ချရေး၊ ဒီမိုကရေစီရ ရှိရေးအတွက် ပြည်သူလူထုလူတန်း စာပေါင်းစုံက စုပေါင်းတောင်းဆို ခဲ့ကြရာမှ သြဂုတ် ၈ ရက်ကို ရှစ် လေးလုံး လူထုဒီမိုကရေစီအရေး တော်ပုံနေ့အဖြစ် ပြည်သူလူထုက သတ်မှတ်၍ လူထုအခမ်းအနားများ ကျင်းပနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။
ကလေးဝ ကျောက်မီးသွေးမိုင်းတွင်း ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်ကို သတ္တုတွင်း ဦးစီးဌာန စစ်ဆေးမည်
ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်း ခရီးစဉ် သင်္ဘောကြီးများဖြင့် သရက်မြို့သို့ နိုင်ငံခြားသားများ ဝင်ရောက် လည
မူကြိုသင်ဆရာ၊ ဆရာမများကို လေ့ကျင့်ပေးရန်နှင့် အာဟာရကျွေးမွေးရန် ဘတ်ဂျက်ထည့်သွင်းပေးရေးအ??